Tiavo ny Tompo Andriamanitrao....
Naseho ny : 25 oktobra 2020
Alahady 25 ôktôbra 2020 — Alahady faha-30 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 22, 34-40 — Hankalazaina anie ny Mpanjaka avy, amin’ny Anaran’ny Tompo ! Fiadanana anie any an-danitra, ary voninahitra anie any amin’ny avo indrindra.
Resaka fitiavana ny hafa sy fanajana azy no votoatin’ny Tenin’Andriamanitra anio. Tian’Andriamanitra raha asehontsika amin’ireo olon-kafa ivelan’ireo namantsika sy ny mpiray tanindrazana amintsika izany fitiavana sy fanajana izany. Ireo hafa lazaina etoana moa tsy iza fa ireo hafa foko sy firenena amintsika, ireo mahantra sy ampahoriana. Mila mitia sy manaja azy ireny isika, izany hoe, mila mirary sy mikatsaka ny soa ho azy ireo mialohan’ny hanampiantsika azy ireo araka izay vita, toy ny fanohanana azy ireo ara-tsakafo, indrindra amin’izao fotoana izao, fanolorana fitafiana ary indrindra ny fisiantsika eo akaikin’izy ireo…
Tsarovy anefa fa mifanindran-dàlana mandrakariva amin’ny fitiavana an’Andriamanitra io fitiavana ny hafa io : tsy afaka hitia azy ireo isika raha tsy tia an’Andriamananitra ihany koa. Zary poakaty sy voafetra ny fitiavantsika ny hafa raha toa ka tsy miainga avy amin’ny fitiavana an’Andriamanitra izany satria amin’alalan’ny fitiavana an’Andriamanitra no ahafahantsika mitia araka ny tokony ho izy azy ireo. Izany hoe io fitiavana an’Andriamanitra io no mari-drefin’ny fitiavana ny hafa.